एमाले : प्रदेश न केन्द्र, दुवैबाट बढारियो « News24 : Premium News Channel
एमाले : प्रदेश न केन्द्र, दुवैबाट बढारियो
काठमाडौं । नेकपा एमाले पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो मिलाउन नसक्दा सोमबारदेखि प्रदेश र केन्द्र दुवैबाट बढारिन पुगेको छ । साेमबार प्रदेश नं १ मा मुख्यमन्त्री रहेका भीम आचार्यकाे राजीनामासँगै एमाले प्रदेश र केन्द्र दुवैबाट बढारिएकाे हाे । यसअघि गण्डकी, लुम्बिनी, बागमतीबाट एमाले सत्ताकाे भर्याङ्बाट ओर्लिसकेको थियाे । प्रदेश नम्बर १ मा भने तत्काल सरकारबाट नहटेकाे एमाले साेमबार हटेसँगै सबै प्रदेशमा विपक्षी भूमिकामा पुगेकाे छ ।
थाेरै कुरा गराैँ, त्यतिबेलाकाे । जतिबेला प्रधानमन्त्री रहँदा एमाले अध्यक्षा केपी शर्मा ओली पहिलाे पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यसपछि पार्टीमा भूकम्प गयाे । एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेकाे नेकपा दुइ भागमा विभाजित भए । एउटा ओली समूह र अर्काे पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, झलनाथ खनाल र माधव नेपालसहितको समूह । प्रचण्ड-नेपाल-खनाल समूह ओलीविरुद्ध सडकमा उत्रिए । सर्वाेच्चले संसद विघटनलाई बदर गर्याे । प्रचण्ड-नेपाल-खनाल समूहमा लड्डु बाँडियाे तर, नेकपा रहेन ।
सर्वाेच्च अदालतले नेकपालाई टुक्राएर पूर्ववत् रुपमै एमाले र माओवादीमा फर्काइदियो । सर्वाेच्चको परमादेशपछि प्रचण्ड माओवादीमै फर्किन बाध्य भए । एमालेभित्रको नेपाल–खनाल गुट पनि पार्टीमा फर्कियो तर, बस्न सक्ने अवस्था भएन । र, फुट्यो नेकपा एमाले । नेपाल–खनालले बनाए, नेकपा एकीकृत समाजवादी ।
दुई पटक संसद विघटन गरेका ओली त्यतिन्जेलसम्म सर्वाेच्चको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट हटिसकेका थिए । बनिसकेको थियो देउवा सरकार । र, गुमायो केन्द्रको साख ।
अलिकति यो पनि कुरा गरौँ । नेपाल–खनाललाई अन्तिम घडीमा साथ दिएका एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव योगेश भट्टराईलगायत १० जना एमालेमै रहेर विद्रोह गर्ने भने र उनीहरु नेपालको नयाँ पार्टीमा गएनन् । र, अहिले उनीहरु एमालेमै अध्यक्ष ओलीको चेपुवामा परेका छन् ।
त्यतिबेला एमाले एकता गर्न बनेको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको छैन । १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बनेको कार्यदलका अध्यक्ष भीम रावलले ओलीको पेलाइ सहन नसकेपछि पदबाट राजीनामा दिए । तैपनि ओलीले १० बुँदे माग पूरा हुन्छ भन्दै १० भाइसँग पहिलाको रिसइबी साध्न हँसिलो अनुहार बनाएर ‘हुन्छ, हुन्छ’ भन्दै लोप्पा खुवाइरहेका छन् ।
अब, कुरा गरौँ, एमालेको प्रदेश र केन्द्रबाट बहिर्गमन कसरी भयो ? किन भयो ? कारण के थियो ? वनमा डढेलो लागेपनि निभाउने अवसर हुँदाहुँदै ‘ओली दम्भ र अहंकार’ ले अन्तत एमालेले दुवै तहमा आफ्नो अस्तित्व मेटायो ।
एमाले नछुट्टिदै कर्णाली प्रदेश सरकारमा एमालेका नेताहरुले फ्लोर क्रस गर्दै माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिए । त्यसपछि एमालेमा डढेलो यसरी सल्कियो कि निभाउने भन्दा पनि बाल्नै खोजियो ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फ्लोर क्रस गर्नेलाई कारवाही गरे । तर, फ्लोर क्रस गर्ने क्रम रोकिएन । त्यसपछि गण्डकी, लुम्बिनी, बागमती र प्रदेश १ को सरकार गुमाउन पुग्यो । दुई नम्बर प्रदेश र कर्णालीबाहेक ४ प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाएकाे एमाले अन्ततः आज सोमबार (१५) गतेबाट बढारिन पुग्यो ।
सोमबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पदबाट राजीनामा बुझाएसँगै एमाले केन्द्र र प्रदेशबाट बढारिन पुगेको छ । र, एमालेको विगत र वर्तमान घटनाको संक्षेप यहीँ हो ।
एजेन्सी । भारतको हरियाणामा कार दुर्घटना हुँदा ५ जनाको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार भएको